DEG-DEG Baarlabaanka Soomaaliya oo Su’aalo Kulul Weydiinaya 2 Waziir oo ka Tirsan Xumda.
Home Somali News East Africa DEG-DEG Baarlabaanka Soomaaliya oo Su’aalo Kulul Weydiinaya 2 Waziir oo ka Tirsan...
Xildhibaanada Baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta waxaa hortgay Wasiiro ka tirsan Xukuumadda Soomaliya oo halkaasi lagu weydiinayo su’aalo la xiriira holaha laxariira wasaaradahooda.
Wasiirka Gaashaandhiga Xukuumada Soomaaliya iyo wasiirka arimaha dibada Xukuumadda Soomaaliya ayaa waxa ay si toos ah u hortagan yihiin Baarlamaanka Soomaaliya hortiisa halkaasi oo su’aalo lagu weydiinayo.
Wasiirka Gaashaandhiga ayaa su’aalaha la weydiinayo waxaa kamid ah arimaha la xiriira sababta Maxkmada ciidamada qalabka sida ee dowladda Soomaaliya ay u xirtay wariyaha Bbc-da ee Magaalada Muqdisho,isaga oo sheegay wasiirka in sababahaasi ay yihiin qaladaad uu ka galay maxkamada ciidamada.
Wasiirka arimaha dibada Xukuumadda Soomaaliya Fowsiyo yaa iyada su’aalaha Baarlamaanka Soomaaliy ay weydinayaan waxa kamid ah sababha keenay in la kireeyo safaarada Soomaaliya ee dalka Talyaaniga halkaasi oo uu dhawaan kireeyay safiirka Soomaaliya ee dalkaasi.
Wasiira ayaa sheegtay in Ra’iisul Wasaaraha iyo iyada ay ka yeesheen arimahaasi kulan balaaran islamarkaana ay isku afgarteen in sida ugu dhaqsiyaha badan wax looga qabto si aysan safaarada gacanta Soomaaliya uga bixin.